Daawo Video: Magaalada Muqdisho Oo laga Furay Xarumo Haweenka Jirdkooda looga Ganacsado!.
Sunday September 30, 2018 - 08:44:42 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Markii ugu horraysay dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa xaqiijisay in magaalada Muqdisho ay ka Furanyihiin xarumo hablaha jirkooda looga ganacsado ayna kusii badanayaan degmooyinka gobolka Banaadir.
Jawaahir Baarqab oo ku magacaaban guddoomiyaha Haweenka Gobolka Banaadir ayaa Cabdi Raxmaan Yariisoow ka hor qirtay in dhowr xarumood oo Zinada lagu faafiyo ay kajiraan magaalada Muqdisho waxayna carrab dhowday xeebta Liido oo laga furay xarumo dumarka lagu fasahaadiyo.
Waa qiraal nuuciisa oo kale uu yahay dhif iyo naadir balse fuxshigaan magaalada waa ka jiray sanadadii dambe oo dowladda ayaa isku dayaysay in ay shacabka ka qaruso Jawaahir Baarqab iyadoo hadlaysay ayay tiri "Waxaa jira markii aad tagto xilliyada habeenkii liido gabdho badan oo bajaaj lagu keenayo, waxaan jira meel la yirahdo backa sii, tasina ay tahay faaxisho aad u badan,anaga waxaana nahay haween mar walba qaxaan ka hadalnaa iyo dhibaatada haweenka loo geysanayo".
Waxay intaas ku dartay in garoonka diyaaradaha Muqdisho lagasoo dajiyo dumar qurbaha laga keenay kadibna lawaayo halka ay jaan iyo cirib dhigaan sidoo kalane ay jiraan gabdho waalidkooda usheega in ay aadaan goobo waxbarasho balse taga goobaha Zinada lagu faafiyo iyo haweenka jirdkooda looga ganacsado.
Warbaahinta islaamiga ah ayaa horay ufaafisay in Hotello waaweyn oo kuyaal Muqdisho ay xildhibaanno iyo mas'uuliyiin katirsan dowladda ka dhigteen xeryo Zinada lagu faafiyo ayna dhaqan xumo soo kordhiyeen.
Fuxshiga kajira gobolka Banaadir waxaa faafintiisa kaalin weyn ku leh dad qurba joog ah oo dibadaha lagusoo anshax xumeeyay iyo hay'ado shisheeye oo qarash ku bixiya sidii haweenka guryaha loogasoo saari lahaa taas oo macnaheedu yahay in Zinada guri walba lageliyo.
Al Shabaab ayaa dhowr jeer weeraro ku qaadday Xeebta Liido iyadoo sheegtay in dowladda Federaalka ay halkaas ku faafinayso faaxisho iyadoona xarakadu uga digtay shacabka in ay tagaan goobaha xumaanta lagu faafiyo oo bartilmaameed u ah mujaahidiinta
Hoos Ka Daawo Jawaahir Baarqab oo faah faahinaysa goobaha Dumarka Jirkooda looga ganacsado ee Muqdisho ka furan